Knowledge – Let Pan Daily
Let Pan | August 15, 2021
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာဗေဒင် ဟောစာတမ်း (၁၅.၈.၂၁) မှ (၂၁.၈.၂၁) အထိ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ … crd zawgyi ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ တစ္ပတ္စာေဗဒင္ ေဟာစာတမ္း (၁၅.၈.၂၁) မွ (၂၁.၈.၂၁) အထိ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ …
အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၂၆) နှစ် အတွင်း ကျွန်တော့် ရဲ့ ငွေရှာနည်း၊ ငွေစုနည်း !!!
Let Pan | August 14, 2021
ငွေစုရတာဟာ ငွေရှာရတာထက် ပိုခက်ပါတယ် ငွေစုရတာ ဟာ ပညာပါပဲ မိမိငွေကို သူများ လက်ထဲ ဘယ်တော့မှ မထားပါနဲ့ ချမ်းသာချင်ရင် စုဗူးနဲ့စုပါ သောက ရောက်ချင်ရင် စုမဲ စုပါ စားသမျှ ချီးဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ လူတန်းစေ့မနေနိုင်ခင်လူတန်းစေ့မစားချငိပါနဲ့ အဟာရဖြစ်အောင် ကျန်းမာအောင်ပဲ စားပါ ထမင်းနှပ်မှန်အောင် စားရဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်
Let Pan | August 8, 2021
ဆီးချို သွေးချိုရောဂါဆိုသည်မှာ အသက်အရွယ်မရွေး ကျား မ တိုင်း ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သလို မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်များခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆီးချို သွေးချိုရောဂါက လူတွေကို မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အပြင် တစ်ချက်လေး မှားလိုက်တာနဲ့ လူတွေရဲ့ အသက်ကိုပါ ဆုံးရှုံးထိခိုက်သွားစေနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုတက်လာပြီဆိုရင် ဘယ်လိုတွေပြင်းထန်စွာ
ကူးစက်ရောဂါတွေ ကို တွန်းလှန် နိုင်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုယ်ခံအား မြင့်တက်စေတဲ့ အစားအစာများ
Let Pan | August 7, 2021
တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါး ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကူးစက်ရောဂါကို ကြောက်နေရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ယူနီဆက် က အကြံပြုထားတဲ့ အချက်တွေကိုလိုက်နာရမယ့်အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုယ်ခံအားမြင့်တက်နေအောင် နေထိုင်စားသောက်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော် ခန္ဓာကိုယ်ကို သဘာဝနည်းနဲ့ ကိုယ်ခံအားကို မြင့်တက် စေမဲ့ အစားအစာလေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်က ပြန်လည်တိုက်ထုတ်နိုင်မယ့် မီးဖိုချောင်ထဲက အစားအစာတွေက
Let Pan | July 26, 2021
တနင်္ဂနွေ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ No.1ရုပ်တည်ကြီး နေတတ် ပေမယ့်.. တကယ်ခင်သွားရင်လဲ သူငယ်ချင်း အဖွဲ့ထဲ မှာ မျက်နှာအပြောင်ဆုံးက သူပဲ အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကံခေတယ် ရတာမလို လိုတာမရတွေလေ.အစွဲလန်းလဲ ကြီးတယ် ချစ်ပြီဆို တခြားလူ နဲ့ မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်မကြည့်တတ်ဘူး အချောကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု အရမ်းရှိတယ်
(၂၅.၇.၂၁) မှ (၃၁.၇.၂၁)အထိ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အတွက် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
Let Pan | July 25, 2021
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း (၂၅.၇.၂၁) မှ (၃၁.၇.၂၁)အထိ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း (၂၅.၇.၂၁) မှ (၃၁.၇.၂၁)အထိ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ … crd
Let Pan | July 21, 2021
1 ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည် UV2အပူချိန် 56* C အပူချိန် မြင့်တာ3လေဝင်လေထွက် ရှိနေရာ4ကလိုရင်း ပိုးသတ်ဆေး5အရက် Alcohol 75%6လက်တွေကို မကြာခန ဆေးကြော7ခံနိုင်ရည်ရှိတာ ကိုယ်ခံအားကောင်းတာ ကိုယ်ခံအားကောင်းခြင်းဟာ
ယခုဗိုင်းရပ်စ်အသစ် မှာ သေဆုံးသူ လုံးဝမရှိတဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ မှ ဆေးနည်းကောင်း (အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
Let Pan | July 20, 2021
ယခုဗိုင်းရပ်စ်အသစ်မှာ သေဆုံးသူလုံးဝမရှိတဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ မှ ဆေးနည်းကောင်း Vietnam ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ဗိုင်းရပ်စ်သစ်သည်သေဆုံးနှုန်း လုံးဝသုညရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူများသည် စူပါနိုင်ငံဗီယက်န မ်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်… သင်သည် ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်နှင့်အတူကူးစက်ရင်တောင်သေမှာ မဟုတ်သည်မှာသေချာသည်။ အချက်အလက်များစွာကဖော်ပြချက်သည် အလွန်ရိုးရှင်းသည်ဟုသက်သေပြသလိုလည်းအထူးသဖြင့်ထိရောက်မှုရှိသည်… အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စူပါကုထုံး၏ လျှို့ဝှက်ပုံသေနည်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် ၁= လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုရေပွက်ပွက်ဆူတွင် ပြုလုပ်ပါ။ ၂= သံပုရာဖျော်ရည်ကိုရောစပ်ပြီးနောက်လက်ဖက်ရည် ပူသောက်ပါ။ ၃= ဤလျှို့ဝှက်ချက်သည်
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ၏ တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း(၁၈.၇.၂၁) မှ (၂၄.၇.၂၁)အထိ
Let Pan | July 18, 2021
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း(၁၈.၇.၂၁) မှ (၂၄.၇.၂၁)အထိ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ …. crd